गहुँ छर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस । - कृषि डेली
Home banner गहुँ छर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस ।
काठमाडौं – यो समय किसानहरु धान खेती थन्काएर गहुँ छर्ने चटारोमा छन् । कुनै पनि बालीहरुको खेती गर्दा त्यसको बीऊ के कस्तो छ, उमारशक्ति कति छ, बीऊ रोगी छ कि छैन, गतवर्ष रोपेको बालीमा के कस्ता रोग देखापरेका थिए यी सम्पूर्ण कुराहरुको पहिचान गरेर मात्र बीऊ छर्नु पर्ने हुन्छ ।
गहुँ खेती गर्दा पनि यसको उत्पादनमा बीउको निकै ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । यदि तपाईको गत वर्ष गहु‘ खेतीमा कालो पोके रोग देखापरेको थियो भने सकेसम्म त्यस्तो बीऊ प्रयोग नगर्दा हुन्छ। यदि गर्नै पर्ने बाध्यता भएमा बीऊलाई १-२ घाम सुकाई, सफा गरी कालोपोके रोग निवारणको लागि भाइटा भेक्स–२०० नामको विषादी दुई ढाई ग्राम प्रतिकेजी बीऊका दरले बीऊको उपचार गर्नुपर्दछ ।
बीऊ उपचार गर्दा एउटा खाली जर्किन वा डब्बामा १ केजी बीऊ राख्ने र त्यसमा दुई ढाई ग्राम भाइटा भेक्स–२०० राखी डब्बा वा जर्किनको बिर्को बन्द गरी ३÷४ पटक तलमाथि गराई हल्लाई उपचार गर्नुपर्दछ । यसरी उपचार गरेको बीऊलाई बताएअनुसारको प्रविधि अपनाइ छर्ने गरे कालोपोके रोगबाट सजिलै बचाउन सकिन्छ ।
गहुँको लागि चाहिने हावापानी
गहुँ खेती विभिन्न हावापानीमा गर्ने गरिन्छ । तराईको ३०० मिटर समतल भू–भागदेखि पहाडको ३००० मिटर उचाइसम्म यसको खेती सफलतापूर्वक हुने गर्दछ । यसको खेती सबै प्रकारको माटोहरुमा हुने गरे पनि दोमटमाटो सबै भन्दा राम्रो मानिन्छ । किनभने यस्तो माटोमा चिस्यान अड्याई राख्ने गुण हुन्छ, तर अन्य चिम्टाइलो माटोहरुमा त्यस्तो गुण हु‘दैन ।
यसरी गर्नुस गहुँ खेतको तयारी
जमिनको तयारी गर्दा सानो काठे हलो भएमा ४-५ पटक ठाडो तेर्सो गरी जोत्ने । यदि मुठेहलो भएमा २-३ पटक मात्रै जोते पुग्दछ । जोतिसकेपछि राम्रोस‘ग हेंगा लगाई डल्ला फुटाउने र माटो मसिनो पारी जमिन तयार पर्दछ । यी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र मल छर्ने र बीऊ छर्ने काम गर्नुपर्दछ । बाली बिरुवाको बृद्धि विकास र बढी उत्पादन लिन राम्रो शुद्ध बीऊको साथै मल खादको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । ठीक मात्रामा, ठीक समयमा मल खादको प्रयोग गर्दा उत्पादन राम्रो लिन सकिन्छ ।
Previous articleपर्यटकीय गन्तव्य बन्दै जखेरा ताल
Next articleउद्योगले भारतीय उखु किन्दा नेपाली कृषक मर्कामा